Channel Istanbul waxaa loo maraa talaabo talaabo ah RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulChannel Istanbul ayaa soo socota tallaabo talaabo ah
Channel Istanbul ayaa soo socota tallaabo talaabo ah
23 / 03 / 2015 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
Canal Istanbul ayaa soo socota talaabo talaabo ah: Dadka ku nool hareeraha mashruuca waxaa loo qaaday 500 tilmaamaha Erdogan. Mashruuc malahan qolal dhismayaasha dhaadheer leh oo isku xiri doona Badda Madow iyo Marmara.
Mashruuca waalan New Turkey ee Istanbul uga billowdo dhammaan faahfaahinta oo waxay gaadhay tan iyo subaxda dambe ugu horeysay loo diyaariyey sidii ay u muuqaal markaad dhamaysid. Kulan ay bishii hore la yeesheen Madaxweyne Tayyip Erdoğan, mashruucan ayaa la go’aamiyay in lagu ilaaliyo ilaha biyaha dabiiciga ah iyo aagagga cagaaran ee magaalada cusub ee ku xeeran marta. Cufnaanta dadweynaha ee magaalada cusub ayaa laga yareeyey 1.2 milyan oo loo beddelay 500 kun. Madaxweyne Erdo himselfan laftiisu wuxuu siiyay tilmaamo lagu yareynayo dadka ku nool magaalada in laga sameeyo kanaalka. Waxaa la go'aamiyay in lagu daro 250 kun oo dad ah oo labada dhinac ah. Waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo dhirta dabiiciga ah xitaa buundooyinka in laga dhiso kanaalka si xayawaanku ugu noolaadaan deegaanka dabiiciga ah.
Meelaha banaan ee gudaha mashruuca ayaa si gooni ah loo cayimay. Goobaha baadiyaha, dooxooyinka iyo sariiraha digaaga ayaa la go'aamiyey in la ilaaliyo intii suurtagal ah. Meelaha banaan waxaa ka mid noqon doona kala duwanaanta noolaha, goobaha bannaanka, goobaha madadaalada iyo firfircoonida firaaqada, wax soo saarka cuntada yar iyo dhirta geedaha kala duwan. Jardiinooyinka qadiimiga ah ayaa la abuuri doonaa. Xayawaanka waxaa lagu dhisi doonaa meel u dhow agagaarka qoryaha iyadoo qayb ka ah shabakadda furan.
Markii uu madaxweynaha Erdogan "amaba dhismayaal dheerad ah", dhererka dhismuhu wuxuu ku koobnaa dabaqyada 6. Dhismooyinka Tallaalka ayaa laga dhisi doonaa kanaalka. Kanaalka ayaa la dhisi doonaa si loogu oggolaado marinnada waaweyn ee maraakiibta. Ka dib marka la dhamaystiro qorshaha naqshadeynta magaalada sida ku cad dadweynaha cusub, wajiga qorshaha degaanka ayaa bilaabmi doona. Xaaladdan dhexdeeda, geeddi-socodka waxaa maamuli doona Magaalada Metropolitan iyo shirkadda degmada BIMTAS.
KA BADAN TAHAY IN LAGU QAADO 6 KATA
Waxaa jiri doona silhouette asalka ah oo magaalada ah oo lagu dhisi doono hareeraha kanaalka. Dhismahan, dhismaha si tartiib ah ayaa looga dhisi doonaa dhismooyinka nooca dhismaha ee dhismayaasha mashaariicda ah oo dhismayaasha ay yeelan doonaan dabaqyada ugu badan ee 6. In "Tirada Falanqaynta Dhulka" ee degaanka mashruuca, macluumaadka soo socda ayaa la bixiyey: dhismaha Qaadashada dhismaha ugu sareeya ayaa laga fogeeyey wareegga kanaalka iyo meelaha bannaan ee xuduudda dejinta, sidaas darteedna loo kordhiyo aragtida kore ee degaanka. Marka la barbar dhigo bariga geeska kanaalka, waxaa laga helaa dhar toosan, oo ku xiran aagga ganacsiga dhexe ee dhanka waqooyi iyo koonfur. Tifaftirka dhererka dhismaha ayaa raacaya khadka gaadiidka dadweynaha si ay dhismaha ugu dheer ugu jiraan saldhigyada metro ... "
XADGUDUBKA GURIGA AAD U QAADO
Channel Istanbul iyo jasiiradda 2 iyo jasiirad ayaa la sameyn doonaa. Mashruucu wuxuu loola jeedaa in la joojiyo taraafikada. Markabka 150-160 waxaa lagu bartilmaameedsanayaa inuu ka soo baxo Kanal Istanbul. Diiwaanka Kanal ee Istanbul ayaa loo soo bandhigay madaxweyne Erdogan, goobaha gaadiidka waxaa lagu sharxay sida soo socota: "Habka qaabka badan ee ujeedkiisu wuxuu ujeedkiisu yahay in la helo fursadaha ugu sahlan ee xarumaha ganacsiga, goobaha warshadaha iyo goobaha shaqada iyada oo aan sababin dhibaatooyin culus. Buundooyinka taageeri doona kartida dejinta iyo kaabayaasha iyo hubinta socodsiinta wadooyinka iyo jidadka gaadiidka dadweynaha ee kala duwan ayaa loo adeegsan doonaa kanaalka. Meelaha waaweyn ee isgoysyada iyo joojinta tareenka xawaaraha sare ayaa lagu muujiyey goobo cad, halka mowjadaha maxaliga ah iyo taraamka joogsiga tareenka lagu calaamadeeyay wadada weyn. Meelahaas waa kuwo istiraatiji ah oo ku xiran aagga ganacsiga dhexe iyo goobo badan oo degaan, iyo xiriirka kale ee gaadiidka ayaa la bixiyaa. "
'V' WAXAA LAGA BARAA
Horaantii Silivri, Ortakoy, Inceğiz, Gökçeli, Çanakça, Dağyenice ayaa loo aqoonsaday inay tahay dhul mashruuc, Karacaköy, Evcik Dam oo ku xiran qaybta Badda Badiga ah ayaa la sii daayay sababtoo ah dhul ballaaran oo la wareegay. Sida laga soo xigtay qorshooyinka, mashruuca wuxuu isku xiri doonaa Badda Madadaarta iyo Marmara Bari ee loo maro degmooyinka Smallucmece, Basakeshir iyo Arnavutköy. Goobta Lakeçekmece Lake ayaa ku biiri doonta kanaalka, Sazlıdere Dam ayaa noqon doona mid naafo ah.
Channel Istanbul waxaa lagu dhisi doonaa qaabka xarafka 'V' laga soo gooyay dhinaca hoose. Baaxadda qaybta hoose waxay gaari doontaa mitirka 100, masaafada u dhexeysa dhammaadka 2 ee xarafka V iyo 520. Qoto dheer ee kanaalka wuxuu noqon doonaa mitirka 25. Mashruucan wuxuu daboolayaa aagaga qaar ka mid ah Istanbul sida Avcılar, Bagcılar, Bakırköy, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Eyüp iyo Küçükçekmece.
DIYAARIYADAHA BULSHAHA WAXAY LAHEYDAY MASHRUUCA
Hannaanka hindisada ayaa bilaabi doona kanaalka Istanbul bilaha soo socda. Mashruucan weyn, oo qiimihiisu dhan yahay 10 bilyan oo doolar, ayaa lagu iibin doonaa gabal gabal. Daraasada farsamada ee mashruuca ayaa la dhammeystirey. Mashruuca wuxuu isku xirayaa Badda Madadaarta iyo Badda Marmara iyadoo la raacayo caqabado macmal ah. MWH Global, Panama Canal, iyo shirkado badan oo Shiineeys ah ayaa la sheegay in ay noqonayaan suxufi. Intaa waxaa dheer, kulamo hordhac ah ayaa lala yeeshay shirkadaha muhiimka ah ee Talyaaniga iyo Ruushka. Dhinaca kale, waxaa la ogaaday in shirkad aad u weyn oo Ruush ah ay qaadi karto dhismaha waddada xalinta xawaaraha badda ee Istanbul.
XIDHIIDHA LAGA HELI KAROMETER 43
Biriijka 6 waxaa lagu dhisi doonaa kanaalka. 4 waxaa loo dhisi doonaa wadada weyn ee weyn. Dhererka hawada wuxuu noqon doonaa 43 km, width wuxuu noqon doonaa mitir 400.
BADBAADINTA WAXAA LAGA QAADO
Malaayiin mitir oo mitir ah ayaa loo isticmaali doonaa dhismaha dekadaha iyo garoomada iyo in la xiro kanaalka.
Kanaalka wuxuu ku xiran yahay Istanbul
Tallaabada kowaad ee magaalada cusub ee Istanbul
Wax Talaabo ah Looma Yaboohin Kanal Istanbul
Menderes Turel ayaa ku dhawaaqay, Mashruuca Channel Channel wuxuu imanayaa
Nissibi waxay u timid Adiyaman
Channel wuxuu noqon doonaa jasiirad dabiici ah oo ka baxsan Istanbul
Gaadiidka Badda ee Badda ee Foça
Channel Istanbul iyo 19 waxay noqon doonaan jasiirad
Yalnizçam Xarumaha Goobaha Badbaadinta Talaabooyinka Gobollada Talaadada Marinka la baaray
Alanya, waxay sii wadi doontaa riyada wabiga
Tallaabo tallaabo ka qaadista Xarunta Soodhaweynta!
3. Saxiix saxiixa on buundada
New Galata Bridge 24 in la xiro Maarso